Ala Nsọ Ahụmahụ - WRSP
Ahụmahụ Ala Nsọ
EXLỌ NT EXKWU AHYRY YLỌ KWES HOLR.
1989: Marvin Rosenthal kwagara Orlando, Florida ma hiwe olile anya Zion, ozi ozioma nke ebumnuche ya bụ ime ka ndị Juu ghọọ ndị na-eso ụzọ Kraịst wee mee ka ndị Kraịst nwee mmetụta nke ọdịbendị ndị Juu na akụkọ ntolite na akwụkwọ nsọ.
1990s: Rosenthal jiri ego nyere ndị nyere aka zụta ala iri-na-ise dị n'okporo ụzọ ndị njem nlegharị anya nke Orlando wee bido iwu na ngalaba ọrụ nlekọta nke akpọrọ Zion's Hope.
1997: Oge nke Mbụ nke Olileanya Zion meghere. Ihe owuwu a $ 2,500,000 were udi ebe ogbako 20,000-square-foot ma gosiputa oghere.
1999: Ala malitere imebi ihe ngosi nka ihe omuma banyere ndu ndu nke olile anya na olile anya Zion, weghachitere ya dika The Holy Land Experience (HLE).
2001 (February 5): HLE meghere ọnụ ụzọ ya n'ihu ọha.
2002: Ndị na-akwado Rosenthal ogologo oge Robert (1938-1999) na Judy Van Kampen nyere nkwado maka iwu nke Akwụkwọ Nsọ.
2002-2005: Attga HLE ji nwayọọ nwayọọ jụ, dị ka ego si adọta mmasị. N'otu oge ahụ, HLE tinyere aka na Bill Donegan, Orange County (FL) Onye na-enyocha ihe onwunwe, na ụtụ HLE na-akwụghị ụgwọ.
2005 (July): N'ịche ụgwọ ịrị elu na nrụgide ka ukwuu site na Board of Directors HLE, Marvin Rosenthal gbadara n'ọkwá onye isi ya na HLE. Ọpụpụ Rosenthal gosikwara nkewa nke izizi ozi olile anya nke Zaịọn na HLE.
2005-2006: Boardlọ ọrụ ndị na-adọrọ mmasị na-elekọta ọrụ HLE kwa ụbọchị.
2006: Steti nke Florida tinyere iwu steeti nke mere ka HLE nwee ike ịnweta ụtụ isi ụtụ isi gọọmentị etiti.
2006: Bill Donegan wepụrụ uwe ya megide HLE.
2006 (Septemba): Trinity Broadcasting Network (TBN), netwọkụ telivishọn telivishọn kachasị na ụwa, nwetara ọdụ Orlando mpaghara WTGL. N'ime oge ahụ, HLE wepụtara ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ na nnukwu ngalaba ndị Kraịst iji chọpụta ohere ịmekọrịta ma ọ bụ ịzụ ahịa.
2007 (June): Ndị isi oche HLE rere ihe nkiri ahụ na TBN maka nde $ 37. Tom Powell, onye ogologo oge so na ụlọ ọrụ HLE, arụnyere dị ka onye isi.
2007 (August 21): Tom Powell gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya dị ka CEO nke HLE na onye otu Board of Directors. Ndị isi anọ fọdụrụnụ bụ ndị guzobere TBN Paul Crouch Sr na Jan Crouch, yana ụmụ nwoke abụọ toro eto, Paul Crouch Jr. na Matthew Crouch. Jan ghọrọ onye isi oche nke ihe nkiri ahụ.
2010: HLE wuru Chọọchị nke All Nations, ụlọ nzukọ 2,000 na ụlọ ihe nkiri.
2012: Nwa nwa ha nwoke na onye isibu TBN Chief Finance Director, Brittany Koper, boro Paul Sr na Jan Crouch ebubo na ha na-eji ego ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ ndụ ha dị oke mma.
2012: Corra Crouch (nwanne nwanyị nke nta nke Brittany) gbara TBN akwụkwọ, na-ebo ebubo na mgbe ọ dị afọ iri na atọ ndị ọrụ TBN metọrọ ya ma dinaa ya n'ike.
2013 (November 30): Paul Crouch nwụrụ site na nsogbu obi.
2016 (May 25): Jan Crouch nwere oke ọrịa strok.
2016 (May 31): Jan Crouch nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri asaa na asaa na Orlando, Florida.
2016 (July): HLE nwere ire ere nke ọ gbanyere arịa dị iche iche, ihe nkwado, na ihe ndị ọzọ ewepụtara n'oge oge Jan Crouch iji belata nrụgide ego.
2017: Ndị juri nyere Corra Crouch $ 2,000,000 maka nhụjuanya na nhụjuanya kpatara Jan Crouch enweghị ịkọ akụkọ mwakpo nke Corra ma nwaa ikpuchi ya.
Mgbe afọ iri na isii na-eduga na ozi New Jersey nke metụtara ma tọghatara ndị Juu gaa na Iso Christianityzọ Kraịst ma kụziere Ndị Kraịst banyere "Juu nke Oziọma" ("The History of Zion's Hope" nd), Marvin Rosenthal [Foto dị n'aka nri] na nwunye ya Marbeth chere na mmụọ nsọ Chineke ga-akwaga ozi ha na etiti Florida. Di na nwunye ahụ rutere Orlando na Ọgọst 1989, n’oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, malitere Zion’s Hope Inc. site na ime ụlọ ha (“The History of Zion’s Hope” nd). Mgbe Rosenthal rutere na Orlando, ọ hụrụ na ọ bụ ala na-eme nri nke ala ọzọ, kamakwa nke nwere ọtụtụ asọmpi. Kpọmkwem, Rosenthal bụ akụkụ nke nnukwu mbugharị nke ndị ozi ụka Ndị Kraịst, ndị otu na ụlọ ọrụ si n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ gaa Orlando na 1980s na 1990s gụnyere gụnyere ndị Wyclif Bible Translators, Asbury Seminary, na Geneva College (Pinsky 1999) ).
Kpọmkwem etu na mgbe Rosenthal bịara n'echiche nke iwuzigharịrị narị afọ mbụ na Orlando bụ ntakịrị ihe jọgburu onwe ya, mana ihe doro anya bụ na o jiri akụkụ ka mma nke 1990s rịọ ego n'aka ndị nyere ego wee jiri ego ahụ mee ihe zuta obere ala nke ohere iputa ozugbo I-4 n'okporo ụzọ dị n'etiti etiti njem njem ndị njem nke obodo ahụ. Na ala ahụ, Rosenthal wuru ụlọ ọrụ ozi dị square-square-foot abụọ nke Olileanya Zaịọn nke gụnyere ọgbakọ ọgbakọ na ebe ngosi. Ihe owuwu a, nke a kọwara dịka akụkụ mbụ nke ọtụtụ afọ, $ 20,000 isi obodo, meghere n'ihu ọha na 10,000,000 (Pinsky 1997).) Oge maka ọrụ ahụ wee bulie. Iji nyere aka na usoro iwu ọzọ, Rosenthal nyere ITEC Entertainment Corporation, otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ogige ntụrụndụ isiokwu nke Orlando nke pọtụfoliyo ya gụnyere Disney World na Universal Studios, iji hazie ma wuo ụlọ ngosi ihe atụ dị ndụ (Canedy 2001) nke, ozugbo e mechara ya, edegharịrị dị ka The Holy Land Experience (HLE). [Foto dị n'aka nri] Ihe $ 16,000,000 a, ihe nkiri acre iri na ise meghere ọnụ ụzọ ọha na eze na February 5, 2001. HLE na-akwụ ụgwọ onwe ya dị ka ebe "ebe Akwụkwọ Nsọ na-abịa na ndụ" ("The Holy Land Experience" nd) na onye mbinye aka ya gụnyere mmeputakwa nke Qumran Caves, oyiri nke ọgbụgba ndụ ahụ, ebe a na-atụrụ ndụ nke Golgotha ​​na Ogige Ogige, na ihe atụ kachasị na ụwa gbasara Jerusalem gburugburu 66 AD (Spalding 2002). Na 2002, ndị na-akwado Rosenthal dị ogologo oge Robert na Judy Van Kampen kwadoro ego maka mwube ihe ngosi nka nke 9,000,000 bible (nke a na-akpọ Scriptorium), nke nwere ụlọ nke onwe ha na ihe odide Akwụkwọ Nsọ (Hampton 2002).
Rosenthal kọrọ na ndị 300,000 gara HLE n'afọ mbụ ya (Flora 2007). Mgbe ihe nkiri ahụ dọtara mmasị ahụ gwụrụ, iju mmiri nke ndị ọbịa na-asọba n'obere iyi, ma jiri ya nweta ego ogige ahụ. Ka ọ na-erule 2005, HLE karịrị ụgwọ $ 2,000,000. N'ịgbalị ime onwe ya ka ọ gbanwee, oflọ Ọrụ Ndị Nlekọta HLE chụpụrụ Rosenthal, belata mmefu ma mebie atụmatụ ahịa ya. N'agbanyeghị mgbalị ndị a, Board enweghị ike ịnweta ụgwọ. Ka ọ na-erule afọ 2006, ọ na - erute na ngalaba ndị ka ibu banyere ikike nke “ịbịa n'akụkụ” HLE (Flora 2007).
Atọ n’Ime Otu Broadcasting Network (TBN), nke kacha ibu na mgbasa ozi mgbasa ozi Ndị Kraịst n’ụwa, gosipụtara mmasị. Tọrọ ntọala site na Paul na Jan Crouch na 1973, TBN bụ alaeze ijeri dollar ijeri nke wuru site n'ire ndị ọrụ Kristi oge ikuku na ịrịọ onyinye (site na telethons) site na ndị na-ekiri ya n'ụwa niile. HLE chọrọ mgbasa ozi iji bulie ndị bịara ya, na Crouches nwere echiche nke ịtụgharị HLE n'ime ụdị "Universal Studios" okwukwe (Flora 2007). Na 2007, a kụrụ ahịa na TBN zụrụ HLE maka $ 37,000,000. Otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ Crouch na-eme bụ ịkpọ onye nnọchi anya ụlọ ọrụ HLE, bụ Tom Powell, dị ka onye isi ọhụụ ọhụụ. Ka izu iri gachara, Powell gbara arụkwaghịm n'ọrụ ya (Kimball 2007). Mgbe ọpụpụ, HLE si Ndị isi nke ndị isi gụnyere ndị ezinụlọ Crouch.
Na njedebe nke ọpụpụ Powell, Jan Crouch [Foto dị n'aka nri] weere okpu agha na HLE, ọrụ ọ rụrụ ruo mgbe ọ nwụrụ na 2016. Ọ bụ ezie na Jan hapụrụ ọrụ ndị ọzọ kwa ụbọchị, ọhụụ ya na ụtọ onwe ya na-eduzi ọdịbendị ma mara mma nke ogige ahụ. N'ime ọnwa ole na ole ịzụrụ HLE, Jan Crouch malitere itinye akara ya na oghere ahụ, nke gụnyere ịgbakwunye Templelọ Nsọ nke Jerusalem, ụlọ nri, ụlọ ahịa onyinye, ogige ekpere, na ebe ụmụaka na-egwu egwu. Na 2012, HLE wuru ụlọ nzukọ 2,000 nke oche nke All Nations ("Church of All Nations"). Facilitylọ ọrụ ahụ na-akwado ọtụtụ ihe ngosi ndụ kwa ụbọchị, ntinye oge ụfọdụ maka akara aka TBN, Tonu Jehova, ihe nkiri okpukpe na ndị na-ekwu okwu ọbịa na bekee. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ogige ahụ ewebatala ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ kwa izu, ọrụ ụka, na ngosipụta esi nri.
Kemgbe ọ malitere, HLE enyerela ya aka nke mbụ site n'aka ndị nyere onyinye nkeonwe wee nyezie TBN. Kemgbe 2012, onyinye TBN na HLE belatara nke ukwuu, na-etinye nrụgide ego ka ukwuu na nzukọ ma na-ahapụ ọdịnihu ya na obi abụọ. Paul Crouch nwụrụ na 2013 na Jan na 2016. Mgbe ọnwụ Jan gasịrị, TBN mere obere ndozi nke ogige ahụ, nke kachasị gụnyere iwepụ ọtụtụ ihe ịchọ mma ịchọ mma ewepụtara n'oge oge Jan ("Holy Land Experience Faith and Family Theme Park" 2016).
Rosenthal chetara HLE dị ka ihe na-adọrọ mmasị nke ga-eji ntụrụndụ (n'ụdị dioramas, ngosipụta, mmemme na mmeghachi omume nke egwuregwu) iji kụziere Ndị Kraịst banyere ọrụ ndị Juu, akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị na akwụkwọ nsọ na ịkọwa ndị Juu "eziokwu ahụ nke Jizọs Kraịst dịka Onye Nzọpụta nke ụwa ”(“ Ozi ahụ. ”nd). Ọ bụ ezie na ogige isiokwu ahụ na-ekwu hoo haa na echiche ndị ụwa nke ndị Kraịst, n'okpuru nche nke Rosenthal, saịtị ahụ nwere otu ụdị nke Protestantism evangelical n'echiche ndị ụka. Enwere ike ịchọta ihe akaebe maka nke a n'ụzọ doro anya na atumatu ego ogige ahụ, nke chọrọ ndị ọrụ ọhụụ ka ha banye nkwupụta nkwenkwe Ndị Kraịst nke nkwenkwe na ewepu nkwenkwe na omume Pentikọstal (Clarke 2001).
Echiche siri ike nke Rosenthal banyere Pentikọstal gbanwere n'okpuru nlekọta nke TBN ruo n'ókè ebe ogige ahụ n'ihu ọha ma na-arụsi ọrụ ike na-akwalite ọdịbendị nke nsọpụrụ ofufe (Stevenson 2013). Onye isi n'etiti ebe nlegharị anya "imetụ" ndị ọbịa aka wee mepụta ahụmịhe nke mmụọ bụ ebe ngosi ihe nkiri nke ogige ahụ nke akpọgidere Jizọs n'obe. The nkwa (Ọgụgụ ahụ tupu 2016). N'ime arụmọrụ ahụ niile, ndị na-eme ihe nkiri na-agbaji mgbidi nke anọ site na ịrịọ mmeghachi nke ndị na-ege ntị. Mepụta ọtụtụ arịrịọ maka oohs, aahs, amens, na daalụ ndị nwenụ, bụ ọkpụkpọ òkù ka ha bụrụ akụkụ nke akụkọ Crucifixion n'onwe ya. N'oge a dị oke mkpa, onye na-eme ihe nkiri na-egwu Jizọs na-eme ka ọ ga-arụ ọrụ ebube gwọọ onye otu ọzọ so na ya, bụ onye na-egwu otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya. Kama ịkwaga nkata ahụ gaa na njedebe ya, Kraịst na-egbu oge ya na akara aka ogologo oge iji gbadata igwe mmadụ ma rụọ "ezigbo" okwukwe na-agwọ ndị ọrụ ebube sitere na ndị na-ege ntị (Lowrie 2014; Silverman 2016).
Okwukwe nke na-agwọ ọrụ ebube ndị emere na ọkwa HLE gụnyere omume dị n'etiti esemokwu esemokwu nke mgbasa ozi nke TBN kwuru. A na-akpọkarị ozioma ọganihu, nkà mmụta okpukpe a na-ekwusi ike na ndị na-enye Chineke n'ụdị inye onyinye nye ndị ọrụ ụwa ga-enweta, na nzaghachi, iji akụ na ụba na ahụike (Woo 2013). Otu n'ime akụkọ Jan kasị amasị ya ịkọ n'ikuku bụ oge ọ kpọlitere anụ ọkụkọ ya n'ọnwụ. Ka akụkọ a na-aga, Jan dị afọ iri na abụọ tụrụ ụjọ ma wute ya mgbe ụgbọ ala kụrụ anụ ufe ọ hụrụ n'anya na ozu ya mang nke na otu n'ime anya ya si na nkwụ ya. Ọ bụ ezie na ọkụkọ ahụ anwụchaala, ọ dịghị otú ahụ ogologo oge. Mgbe nnụnụ ahụ rịọsiri Chineke arịrịọ ike n'ihi ọkụkọ, ọ gbakere kpamkpam (Zadrozny 2016).
Achọghị ndị ọbịa ugbu a na HLE maka onyinye nye TBN, opekata mpe karịa ọnụahịa tiketi nnabata ha. Agbanyeghị, njikọ jikọrọ ọnụ na ụkpụrụ ndị bụ isi nke oziọma a na-agbasa agbasasị n'ogige ahụ, ọkachasị n'ụdị ekpere na ebe a na-akpọ ogige ịgwọ ọrịa. Ezubere mmanya ndị a bara ọgaranya maka ntụgharị uche onwe onye, ​​mana site n'ụdị ihe a kpọrọ ha na ebe ha nọ, oghere ndị a na-arụkwa ọrụ n'ụzọ aghụghọ ma dị ike iji chọpụta TBN dị ka akụkụ dị oke mkpa nke usoro nke mmụọ, nke mmụọ, na usoro ọgwụgwọ oge.
Ọ bụrụ, site na mkpakọrịta ya na TBN, HLE na-arụ ọrụ na echiche nke ozi ọma nke ọganihu, Akwụkwọ edemede, [Foto dị n'aka nri] nke bụ akụkụ nke akara ụkwụ anụ ahụ nke ogige egwuregwu mana ejiri ya ma jikwaa iche na ya, na-ekwurịta okwu nnwere onwe ya nke ọ na-ekwu maka atụmatụ echiche dị iche. Ihe ngosi nka ihe omuma nke $ 9,000,000 nke nwere ebe obibi bu Van Kampen Nchikota nke ihe ndi ozo, akwukwo nke ano nke udiri ya n’uwa. Ihe ngosi a na-abanye oge na-eme ka ndị ọbịa gaa na akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ nsọ site na mmalite dị ala ya na ederede oge ochie na akwụkwọ ederede. Site n'igosiputa Mgbanwe nke Europe dika oge di nkpa mgbe akwukwo nso na-abia, na ime nke a, o ruru onodu ya zuru oke, ebe ihe ngosi nka na-agbaso nkwenkwe ndi Protestant nke naanị akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ ezie na njirimara elu elu nke akwụkwọ nsọ (oke akwụkwọ, ụdị font, ọnụ ọgụgụ ihe atụ wdg) nwere ike gbanwee oge, okwu Chineke bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na eziokwu (Mathews 2015).
HLE na-egbochi ókè n'etiti edemede nke ebe ngosi ihe mgbe ochie na akụkọ ihe mere eme na ụka site na ijikọta mmegharị oge na omume na omume okpukpe. Ndị ọbịa dị ugbu a na ogige ntụrụndụ nwere ike ịbịaru nso na nke onwe ha na igbe nke ọgbụgba ndụ ahụ ewughachi ma na-ele ndị na-eme ihe nkiri gosipụtara otú e si ebufe ya n'ọzara ruo afọ iri anọ na ihe kpatara ya. Na mgbakwunye, ha nwere ike iso Jizọs gaa Nri Anyasị Ikpeazụ, ebe ha na-anọdụ ala gburugburu tebụl akụkụ anọ n'ime ụlọ nwere ọkụ gbara agba nke achọpụtara dịka ụlọ oriri na ọ centuryụ -ụ narị afọ mbụ. Mgbe ọ rụchara ọrụ e nyere ya na ngosipụta dị egwu nke Nri Anyasị Ikpeazụ, onye na-eme ihe nkiri na-akpọ Jizọs na-agagharị n’ime ụlọ ahụ ma nye onye ọ bụla ọbịa ihe oriri nke oriri. Dị ka ndị ọrụ ogige gosipụtara, emume a abụghị naanị emume: Jizọs bụkwa ezigbo onye ozi ahọpụtara.
Dị ka ogige ntụrụndụ ndị ọzọ, ebe nkiri HLE, ihe ngosi, na ahụmịhe mmekọrịta na-arụ ọrụ ma na arụ ọrụ. Onye otu na-egwu Jizọs bụ kpakpando a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ihe ngosi, na n’oge dị iche iche n’oge gara aga, ọ ga-ekwe omume ileta ogige ahụ ma mee ya baptizim na omenaala wuru Baptism of Jesus Fountain font, [Foto dị n’aka nri] nke dị nso ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ Churchka nke All Nations . Ndị debanyere aha maka ahụmịhe (n'efu) gbanwere uwe ọcha, Jizọs duru ha banye n'èzí ma mgbe emikpuchara ha n'ime mmiri, a gwara ha na ha anatala onyinye nke Mmụọ Nsọ.
Ihe ọzọ dị iche iche a na-eme n'oge ochie nke na-eme ka ememme okpukpe ruo n'ókè nke iji ya mere ihe ngosi bụ ngosipụta nke Ozizi Elu Ugwu ahụ. Mgbe o kwusịrị okwu dị mkpirikpi ma gọzie ihe yiri achịcha plastik na azụ azụ, Jisọs rịọrọ ndị otu a na-akpọ ekiri ka ha nye ìgwè mmadụ ahụ nri. N'ọnọdụ ezigbo achịcha na azụ, ndị na-eso ụzọ Jizọs nyefere aka ole na ole nke ndị na-akụ azụ goldfish n'aka ndị ọbịa ọ bụla.
Uzo dị n'etiti omume okpukpe na nke a na-emewanye ka ọ jọgburu onwe ya mgbe ndị ọbịa na-enweta oyiri HLE nke Western Wall. Dị ka ndị njem ala nsọ na-aga Jerusalem, a na-akpọ ndị ọbịa bịara mgbidi HLE ka ha dee arịrịọ ekpere na mpempe akwụkwọ enyere ma tinye ha na mgbidi mgbidi. Kwa izu, HLE na-ezipụ ekpere ndị a na Jerusalem, ebe ndị ọrụ afọ ofufo na-etinye ha na ezigbo Mgbidi Ọdịda Anyanwụ. N'etiti 60,000 na 100,000 nke mpempe akwụkwọ ndị a jupụtara na HLE kwa afọ (Mayerowitz 2010).
O doro anya na ihe atụ kachasị emetụ n'ahụ banyere otu ogige ntụrụndụ si arụ ọrụ iji daa ọdịiche dị n'etiti ụka na ụlọ ngosi ihe nka bụ ihe na-eme na saịtị ahụ mgbe ogige ahụ abụghị imeghe. A na-emechi HLE ka ndị njem nleta na Sọnde, mana igwe mmadụ ka na-enuga n'ebe a na-adọrọ mmasị kwa ụtụtụ Sọnde maka ọrụ ofufe na-abụghị ụka nke a na-eme na Chọọchị nke All Nations. [Foto dị n'aka nri] Ndị isi pastọ Tye na Shanté Tribbett nke Live Church Orlando ("Live Church" nd) nabatara, a na-agbasa ọrụ ndị a n'ịntanetị, na mgbe ụfọdụ na TBN.
Marvin Rosenthal lere anya na owuwu nke HLE ma jikwaa mma ahụ ruo mgbe ọ hapụrụ na 2005. N'ime afọ mgbanwe mgbanwe afọ abụọ sochirinụ, ndị isi nchịkwa HLE na-ahụ maka ọrụ ogige ahụ kwa ụbọchị. Mgbe Network Broadcasting Network zụtara HLE na 2007, ha webatara ndị otu ọhụụ ọhụrụ, onye Tom Powell buru ụzọ buru ụzọ, n'oge na-adịghịkwa anya, Jan Crouch. Mgbe Jan nwụsịrị na 2016, HLE abanyela na nlekọta nke ya na nwa Paul Crouch Sr., bụ Matthew Crouch na nwunye ya Laurie.
N'ime afọ iri na asaa kemgbe mmalite ya, akara ukwu nke HLE ka dị otu; isi ihe owuwu abụọ dị na ogige ahụ kemgbe oge ahụ gụnyere Scriptorium (2002) na Church of All Nations (2012). Gbara mgbidi mgbidi ahụ ogige, banye na ya ebe a na-adọba ụgbọala ma soro ụzọ ahụ na-eduga na mbata ya bụ ihe oyiyi ụmụ anụmanụ na-ese ndụ. Na-agabiga site na ezinụlọ nke enyí, giraffes, hippos, rhinos, apes, na ihe ndị ọzọ e kere eke ọnọdụ onye ọbịa ahụ na-atụ anya na a ga-edebe ya n'ihu ọnụ ụzọ nke Ogige Iden. Kama nke ahụ, mmadụ na-esi na ntụgharị ọla dị n'okpuru obere mmepụta nke ọnụ ụzọ ámá Jaffa. Na nghọta kachasị, ogige ahụ kwesịrị iji mepụtaghachi anya na mmetụta nke narị afọ mbụ nke Jerusalem, nke na-eme ka nmikpu nwa oge banye na akụkọ Agba Ochie dị ntakịrị. Ma nke a bụ isi okwu. Mgbagwoju anya, oge na ebe na akụkọ ihe mere eme na akụkọ mgbe ochie, bụ njirimara njirimara HLE, yana otu ụkpụrụ nchịkwa ya.
Kemgbe mmalite ya, ogige ahụ nwere ihe ọ na-azọrọ dị ka ihe atụ 3-D nke kachasị elu n'ime ụwa nke Jerusalem, n'ihe dị ka 66 AD Ngosipụta a na-enweghị atụ na nke na-enweghị atụ na-eme ka o doo anya na HLE enweghị ike ịmepụ nha, ogo ma ọ bụ oke nke ezigbo Ala Nsọ. atụmatụ iri na ise ya, ọ bụrụgodị na ọ chọrọ. Ihe HLE na-enye onye ọbịa ahụ bụ nkwekọrịta. Kpọmkwem, ogige ahụ na-enwe ihe ịga nke ọma na-ada ọdịdị ala nke mpaghara ahụ site na ịkpụgharị akụkụ ya kachasị kọwaa. Ihe so na ya bụ ụlọ arụsị, Betlehem, Golgotha ​​(gụnyere Calvary na Tomb Garden efu), Via Dolorosa, Ugwu Olive, Qumran Caves, na ụlọ elu a ma ama, saịtị nke Nri Anyasị Ikpeazụ. N'otu oge ma ọ bụ ọzọ, ụlọ ndị a niile dị okpukpu abụọ dị ka setịpụrụ maka ngosi egwuregwu nkiri. Nke kachasị dị ịrịba ama na oghere ndị a bụ Golgotha ​​nke edozigharị, ebe, ruo ọtụtụ afọ, a na-eme egwuregwu Passion ahụ a na-awụfu ọbara.
Mgbe Church of All Nations mepere na 2012, a kpaliri ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmemme ahụ n'ime ụlọ mgbakọ a. Otu n'ime ihe kpatara mbugharị a metụtara nkasi obi nke ndị ọbịa: ogige Central Florida na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ maka ọtụtụ afọ. Uru ọzọ sitere na mbugharị nke ihe nkiri egwuregwu metụtara na teknụzụ, na kpọmkwem, ịnweta ọhụụ kachasị ọhụụ kachasị ukwuu. Mgbe ị na-edebe ọmụmụ Kraịst, ozi ya, na Crucifixion na ụlọ ihe nkiri ndị dị n'èzí nwere ike mepụta ahụmịhe nlele akụkọ ihe mere eme, na-eme ka akụkọ ndị a sitere na Akwụkwọ Nsọ na teknụzụ dị elu site n'enyemaka nke ihe ngosi ọkụ ọkụ na igwe igwe igwe na-eme ka ndị na-ekiri oge a nwere ụdị mmetụta mmetụta uche pụrụ iche n'ihe ha na-enwe. N'okwu mmekorita, HLE chọrọ ka ndị ọbịa "metụ" ihe ha hụrụ.
Ọ bụ ezie na Egwuregwu Passion nwere ntụpọ na-adịgide adịgide nke usoro ihe ngosi HLE kwa ụbọchị, ihe ndị ọzọ na-eme n'ogige ahụ na-adịru nwa oge, ụfọdụ na-agbanwe kwa oge. Ihe ndi ozo na-adịgide adịgide na HLE gụnyere ụlọ oriri na ọ Mediterraneanụ Mediterraneanụ dị na Mediterenian, bistros, na ụlọ ahịa ndị na-elekọta ndị ọkachamara n'ụlọ dị ka Goliath burgers na hummus salads. Dabere na obere ụlọ dị nso n'otu ụlọ nri nke ogige ahụ, ebe a na-edebe ihe ngosi nka nwere ngwakọta eclectic nke ezigbo arịa na mmeputakwa. Otu nkume sitere na Gethsemane dị, dịka otu mpempe nke Ebe Ọdịda Anyanwụ ,wa, ọtụtụ ochie Akwụkwọ Nsọ, ụtarị, na okpueze ogwu. Gburugburu n'akụkụ bụ ihe ngosi ọzọ (nke na-emeghere ọha mmadụ n'oge oge na-adịghị anya na naanị obere oge) nke nwere ọtụtụ ihe nchịkọta nke Paul Crouch nke ihe ofufe, arịa, na nka.
N'ebe Ọha ahịa Jerusalem emegharịrị ọhụrụ, ndị ọbịa nwere ike ịlele ngosipụta a na-ebi ndụ n'otu ụlọ ebe ọkwá nkà nwughachiri ewughachi, ụlọ ndị ọbịa, na ebe a na-akpụ ụgbụrụ. Ha nwekwara ike zụọ ahịa maka ihe ncheta. Dị ka ogige ntụrụndụ ndị ọzọ, HLE nwere ọtụtụ ụlọ ahịa onyinye na-ere ihe dị iche iche sitere na akwụkwọ ozioma, DVD, obere shofurs na menorah ruo anụmanụ ndị jupụtara, iko na t-shirts ncheta, mmanụ ndị dị mkpa, na mma agha ụmụaka na okpu agha ndị agha.
Naanị n'èzí isi ụlọ ahịa onyinye bụ ọchị nke ebe ụmụaka na-egwu ụmụaka. Na mgbakwunye na ebe a na-ahụ anya na-eme egwuregwu na egwuregwu mgbatị ọhịa, HLE nwekwara mgbidi na-arị ugwu, ebe ejiji (ebe ụmụaka nwere ike inye uwe oge ma mee ka ha bụrụ ndị Akwụkwọ Nsọ kachasị amasị ha), na nnukwu anụ ọhịa whale isi na ọnụ, ebe ụmụaka nwere ike ịbanye ma kwụpụta ogologo oge, dịka Jona. Mpaghara ụmụaka ahụ nwekwara obe ekpere, obe osisi a na-etinye oghere n'ime ya, bụ nke e mere iji bụrụ ụdị analogị ndị ntorobịa na nke ogige Western Western. N'otu ụzọ ahụ a na-agba ndị nne na nna ha ume ka ha nyefee ndị nke a ekpere, a na-enye ndị na-eto eto nke ogige ahụ ohere idetu ekpere ma tinye mpempe akwụkwọ ahụ n'ime oghere obe.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ihe nkiri ndị HLE gosipụtara pụtara oge, ndị ọzọ adịkwaghị adị. Na 2012, HLE meghere Christus Gardens, ngosipụta ụzọ asaa nke diorama nke akụkọ ntolite na-egosipụta ihe oyiyi ihe eji eme ka ndụ chọọ mma nke ukwuu n'ụdị ejiji na nke a na-acha odo odo. Ihe ngosi ngosi nke ihe ngosi a jikọtara ya na ihe ịchọ mma, ọmarịcha ogige ntụrụndụ mara mma nke Jan Crouch nwere mmasị na ọ dị mfe ịlafu na usoro diorama niile abụghị ụmụ amaala ogige ahụ, kama, zụrụ site na ndagwurugwu Christus Gardens bible mma na Gatlinburg, Tennessee ma webata ya na HLE (Walsh 2012). Mgbe afọ ise gachara, ihe ngosi ahụ mechiri maka ihe ndị na-enweghị isi.
Ihe ndi ozo nke HLE na adighi adi otutu otutu mmadu. N'oge na-adịbeghị anya dịka 2015, e nwere otu onye na-eme ihe nkiri HLE nke Jizọs, na-agagharị n'oké Osimiri Galili (yabụ ọdọ mmiri na-ejide ya), na onye ọzọ nke ọchị ọchị, Jan-Crouch. Ihe ndi ozo ndi puru ighari ma puru iche n'oge ufodu n'ime oge ndi gara aga gunyere ihe oyiyi nke Jisos na ndi ori abuo, ndi akpogidere na obe ha kwesiri na Calvary; Jesus na-aga ije n'elu mmiri na 3D diorama nke dị na Ọchị nke Nwatakịrị nke ogige ahụ, yana Jizọs oge, yi uwe jeans, akwa t-shirt ọcha, yana nku mmụọ ozi, na-agbagharị ọgba tum tum ojii.
Nkwupụta ọha na eze na ozi (nke ebumnuche ya bụ ime ka ndị Juu ghọọ ndị Kraịst) na-ewu ogige ntụrụndụ okpukpe dị n'etiti Orlando adịghị mma nke ọtụtụ, gụnyere yana ọkachasị ndị obodo ndị Juu. N'ikwu okwu banyere ọrụ izisa ozi ọma HLE, onye na-ekwuchitere otu National Defense Defense Irv Rubin kwuru nke ọma, "E nwere ụzọ abụọ ị ga-esi gbue onye Juu - n'ụzọ anụ ahụ dịka Auschwitz, yana n'ụzọ ime mmụọ, ụzọ Marvin Rosenthal." ("Arụmụka na Park Theme Park" 2001). Ndị nnọchi anya JDL sonyeere ndị obodo ime mkpesa maka mmeghe nke HLE. Na mgbakwunye na ịgbagha ụkpụrụ ntọala nke ewuru HLE na ya, ọtụtụ na-ese okwu na HLE na-agbaso ọdịnala ndị Juu, akụkọ ihe mere eme na ihe nketa (Pinsky 2006). Ihe gunyere na mkpesa mkpesa ha bu eziokwu bu na erere ihe ndi okpukpe n'ulo ahia na ihe omuma akwukwo na eji akwukwo ederede ndi Hibru mee ihe banyere ihe ndi Protestant (Mathews 2015; Branham 2009).
Na mgbakwunye na esemokwu metụtara ịdị adị ya, HLE enwekwara nsogbu akụ na ụba. Mgbe Rosenthal rere HLE na TBN, ogige isiokwu ahụ karịrị $ 2,000,000 ụgwọ. Akụkọ gbasara ego na-ekpughe na ikike nke TBN emeghị ka nsogbu ego HLE belata, kama ọ mere ka ha sie ike, na-ebute na eriri igwe nwere ịwụnye ọtụtụ nde dollar kwa afọ n'ime igbe nchekwa ogige ahụ. Dị ka Orlando Sentinel, ịkwụ ụgwọ ego ndị a agbadaala nke ukwuu ebe ọ bụ na 2012, afọ nke TBN ji aka ya kwụsị ịrịọ nkwa nke ndị na-ekiri ha (Justice 2016). Ọ bụrụ na TBN na-ebelata ego na-etinye nrụgide ego na mma, ọnwụ Jan Crouch zigara ya na ọdụ. Naanị ọnwa ole na ole Crouch nwụsịrị, HLE kwupụtara na ọ na-ejide ọrịre ụlọ dị ebube, ebe ọ rere ụlọ, Harley Davidson ọgba tum tum, na ihe ndozi ndị ọzọ (Brinkmann 2016). HLE zara na asịrị ahụ na ire ere ahụ gosipụtara na mma ahụ na-aga n'ihu site na ịkọwapụta na ihe omume ahụ bụ ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma (Wolf 2016).
Ọ bụ ezie na ọnwụ Jan meghere ụzọ maka ọhụụ mara mma, nke dịkarịsịrị ala karị, ọ kabeghị aka ịkọ ma esemokwu ndị ọzọ ejikọtara Crouch nwere ike ịmegharị ngwa ngwa. Mgbe HLE mepere na 2001, o nwetara nnukwu nlebara anya, gụnyere site na Bill Donegan, Orange County's (FL) Appraiser Appraiser. Donegan rụrụ ụka na HLE dị ka ogige isiokwu, na-arụ ọrụ dị ka ogige egwuregwu ma ya mere na a ga-atụ ụtụ dị ka otu. Ndị nwe HLE (Rosenthal na ndị Crouches) jụrụ site n'ịjụ ịkwụ ụgwọ ihe karịrị $ 1,000,000 na ebubo ebubo na ha ga-akwụ ụgwọ ụtụ isi ma gbaa obodo ahụ akwụkwọ maka ụtụ isi na-ekwu na ọ bụghị ogige ntụrụndụ kama ọ bụ "ụlọ ngosi ihe nka Akwụkwọ Nsọ dị ndụ" (Rodgers 2016) ).
Esemokwu ahụ kpalitere ọgụ na-aga n'ihu na nke ọha na eze na-eru nso na njedebe mgbe steeti Florida gafere iwu na-enye ọnọdụ enweghị ụtụ isi nye ndị otu na-egosipụta ihe odide Akwụkwọ Nsọ na ihe ngosi ("Florida Statute 196.1987" 2006). Iwu na akụkụ ya kwuru na enwere ike ịgbatị ụtụ isi nye ndị otu
gosi, gosi, ma kọwaa ihe odide Akwụkwọ Nsọ, akwụkwọ ozi, mbadamba nkume, na ebe ndebe ihe ochie ndị ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ; nye ngosipụta dị ndụ na nke edere edekọ, nkọwa, mmegharị, na ihe atụ nke akụkọ ntolite Akwụkwọ Nsọ na ofufe nke Akwụkwọ Nsọ; ma gosipụta oge, ebe, na ihe omume nke akụkọ ntolite nke Akwụkwọ Nsọ na mkpa ọ dị, mgbe ụdị ọrụ a mepere emepe maka ọha na eze ma dị maka ọhaneze maka enweghị nnabata ụgwọ opekata mpe ụbọchị 1 kwa kalenda n'afọ ("Florida Statute 196.1987")
Ọ bụrụ na usoro iheomume nke iwu ọtọ ọha na eze dị ka enyo, izugbe enyo enen ke ini Washington Post kọrọ na HLE na-akwụ ndị na-eme mkpọtụ ụgwọ n'etiti $ 10,000 na $ 30,000 iji mee ka iwu ahụ (Alter 2006). Dabere na akụkọ gbasara ego, n'etiti 2006 na 2016, HLE zọpụtara onwe ya ihe karịrị $ 2,000,000 na ụtụ isi (Rodgers 2016). Otu iwu ahụ nyere HLE ọnọdụ enweghị ụtụ isi na-ekwupụtakwa na ogige isiokwu agaghị akwụ ụgwọ nnabata na opekata mpe otu ụbọchị kwa afọ. HLE jisiri ike wepụta iwe maka omume mmesapụ aka a na mbụ site n'ịghara ịkpọsa ụbọchị nweere onwe ya kwa afọ ma mesịa site na ijide ya na ụbọchị dị iche iche na ọnwa dị iche iche kwa afọ (Rodgers 2016). N’agbanyeghi na HLE gbalịrị igbochi ohere ịbanye n’ogige a na-akwụghị ụgwọ ọ bụla, ihe na-adọrọ mmasị ya mechara laghachi na nzaghachi maka mmechuihu ọha na eze. N'ime afọ ole na ole gara aga, ogige ahụ ekwuputala ụbọchị ọ bụla n'efu n'efu tupu oge eruo, agbanyeghị naanị ụbọchị ole na ole.
HLE ka na-agbasi mbọ ike ịgbake site na otu nro mmekọrịta ọha na eze mgbe nsogbu metụtara ya. Na 2012, mmụọ nke Taxtụ Taxtụ Isi Emegharịrị n'oge a, n'oge a na ebubo na ndị Crouches na-anwa ịnweta ụlọ ndị Windermere (FL) ya na ya dị ka akụ na-enweghị ụtụ isi. Ndị ọkàiwu nke TBN kwuru na a na-eji ihe ndị ahụ eme ihe dị ka parsonages, ma ọ bụ ụlọ ebe ndị pastọ chọọchị bi. Otú ọ dị, Bill Donegan enweghị nke ọ bụla. Ndị na-ahụ maka ihe onwunwe nke mpaghara ahụ jụrụ kpam kpam arịrịọ ụtụ isi nke TBN na ihe ndekọ ahụ gosiri na ma Paul ma Jan anaghị ebi n'ụlọ oge niile ("Ahụmịhe Ala Nsọ Na-achọ Mgbapụ Taxtụ Isi" 2012). Naanị afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ndị Crouches laghachiri na akụkọ mpaghara ọzọ, oge a maka esere mgbidi Jesus na mgbidi na-eche nche n'akụkụ ọnụ ụzọ HLE. Nsogbu a, dị ka ndị nta akụkọ mpaghara gosipụtara, bụ na mgbidi ahụ ghọrọ ihe ọha na eze (Tracy 2015).
Ka ọ dị ugbu a, ebubo kachasị njọ nke a na-ebo HLE na ndị nwe ya esiteghi na ndị nkatọ na-esite na mpụga, agbanyeghị, kama ọ bụ site na gburugburu Crouch. Na 2012, nwa nwa Paul na Jan, Carra Crouch, gbara TBN akwụkwọ maka ihe merenụ na 2006 mgbe onye ọrụ TBN merụrụ Carra dị afọ iri na atọ n'oge telethon na-ede akwụkwọ na Georgia (Vincent 2016). Na 2017, ndị ọka ikpe Orlando nyere nwanyị dị afọ iri abụọ na anọ $ 2,000,000 ugbu a na mgbu na nhụjuanya na-akpata site na Jan maara ihe banyere mwakpo mmekọahụ, ma gbalịa ikpuchi ya (Stevens 2017).
Iji mee ka ihe ka njọ maka Paul Sr. na Jan, Carra abụghị naanị nwa nwa nwa nwanyị nke Crouch ka ọ bịa n'ihu ebubo ebubo na-ezighi ezi na ezighi ezi na 2012. N'otu afọ ahụ, nwanne nwanyị nke tọrọ Carra bụ Brittany, onye na-eje ozi dị ka onye ntụzi ego nke HLE na oge, kwuru na Paul Sr na Jan tinyere n'ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ iji kwado ụdị ndụ ha dị oke mma. Gụnyere n'etiti okomoko ndị e kwuru na ha nwere ego site na ndị na-ekiri ụtụ isi na-akwụ ụgwọ ego bụ ụlọ obibi mara mma (gbanwere n'ime ụlọ ise kpakpando maka ụmụ anụmanụ abụọ Jan), nri abalị na-eri oke, na ọtụtụ ụlọ ndị ezinụlọ na ndị enyi jiri (Ritz 2012)
N'otu oge iji gbanwee ụlọ ikpe nke echiche ọha na eze laghachi na ihu ọma ha ma mebie Brittany, ndị Crouches gbaghaara ebubo ahụ na ebubo Brittany na-akwụghachi ụgwọ na pụtara ịdọpụ uche na omume nke mpụ ohi (Eckholm 2012). Esemokwu ezinụlọ ahụ malitere ọtụtụ afọ tupu ya akwụsị na nkwụsị nke rụpụtara mmekọrịta dị omimi nke gụnyere Paul Crouch Jr. na ụmụ ya ịhapụ njikọ na alaeze TBN.
Image # 1: Foto nke Marvin Rosenthal.
Foto # 2: Foto nke ọnụ ụzọ Ahụmịhe Nsọ.
Image # 3: Foto nke Jan Crouch.
Foto # 4: Foto nke Akwụkwọ edemede.
Foto # 5: Foto nke baptism na-eme na Baptism nke Jesus Fountain.
Foto # 6: Foto nke Church of All Nations
Gbanwee, Alex na ra. 2006. “Akwụkwọ Nsọ Landland nke Orlando dị na Ahụmịhe na Okpukpe Ndị Ọzọ nke Okpukpe Na-agwakọta Okwukwe na Ntụrụndụ — Ma Ọ Bụ n’enweghị Esemokwu.” The Washington Post, September 23. Nweta site na https://www.washingtonpost.com/archive/local/2006/09/23/bibleland-span-classbankheadorlandos-holy-land-experience-and-other-religious-theme-parks-mix-faith-and-entertainment-but-not-without-controversyspan/509d1eaf-4063-49d9-88cf-fdc4d3c111de/?utm_term=.59b08b5a1e4f na 4 April 2018.
Branham, Joan R. 2009. “Templelọ Nsọ nke Na-agaghị Apụ: Constrụ Ebe Dị Nsọ na Orlando’s Holy Land Experience Theme Park.” Ndị na-aga ije, Septemba: 358-82.
Brinkmann, Paul. 2016. "Nsọ Ala Ahụmahụ ka ibudata Ngwá ụlọ, Ihe oyiyi n'etiti Nsogbu Ego." Orlando Sentinel, July 20. Nweta site na http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-holy-land-auction-20160719-story.html na 4 April 2018.
Mgbapu, Dana. 2001. "A Biblical Theme Park na Florida Begets ọrịa Ga." The New York Times, February 3. Nweta site na https://www.nytimes.com/2001/02/03/us/a-biblical-theme-park-in-florida-begets-ill-will.html na 4 April 2018.
"Chọọchị nke Mba Nile." Ahụmahụ Ala Nsọ. Nweta site na https://holylandexperience.com/exhibit/church-of-all-nations/ na 4 April 2018.
Clarke, Susan Strother. 2001. “Inye Ala Dị Nsọ Arụ Maka ụfọdụ Ndị Kraịst.” Orlando Sentinel, April 8. Nweta site na http://articles.orlandosentinel.com/2001-04-08/news/0104080137_1_holy-land-land-experience-first-pentecostal na 4 April 2018.
"Arụmụka na Park Theme Park." 2001. CBS News, February 5. Nweta site na https://www.cbsnews.com/news/controversy-at-religious-theme-park/ na 4 April 2018.
Eckholm, Erik. 2012. "Ezinụlọ Family Enyele Lee N'ime Lavish TV Ozi." The New York Times, May 4. Nweta site na https://www.nytimes.com/2012/05/05/us/tbn-fight-offers-glimpse-inside-lavish-tv-ministry.html na 4 April 2018.
Osisi, Brad. 2007. "Ahụmịhe Ala Nsọ: Whonye Ga-eketa Alaeze Ahụ?" News 21, August 21. Nweta site na https://news21.com/story/2007/08/23/the_holy_land_experience_who na 4 April 2018.
"Iwu Florida na 196.1987." 2006. Nweta site na http://law.onecle.com/florida/title-xiv/196.1987.html na 4 April 2018.
Hampton, Jim. 2002. “Akwụkwọ ọgụgụ na-eweta mkpokọta Akwụkwọ Nsọ nke Worldwa.” Akwụkwọ akụkọ Orlando Business, January 14. Nweta site na https://www.bizjournals.com/orlando/stories/2002/01/14/newscolumn1.html na 4 April 2018.
"Ahụmahụ Ala Nsọ Na-achọ Mgbasa Taxtụ Isi." 2012. Akụkọ WESH, April 20. Nweta site na http://www.wesh.com/article/holy-land-experience-seeks-mansion-tax-breaks/4415916 na 4 April 2018.
"Ala Nsọ Ahụmịhe Oche-na-ezi-na-ụlọ na-ekwupụta ọhụụ ọhụrụ, emelitere." 2016. Ekeji PR Newswire, August 3. Nweta site na https://www.prnewswire.com/news-releases/holy-land-experience-faith-and-family-theme-park-announces-fresh-new-look-updated-exhibits-and-productions-300308142.html na 4 April 2018.
Ikpe ziri ezi, Jessilyn. 2016. "Ahụmahụ Paul na Jan Crouch nke Ala Nsọ dakwasịrị Nsogbu Ego Mgbe Ha Nwụsịrị." Akụkọ Charisma, July 21. Nweta site na https://www.charismanews.com/us/58756-paul-and-jan-crouch-s-holy-land-experience-plummets-to-financial-chaos-after-their-deaths na 4 April 2018.
Kimball, Josh. 2007. "Isi nke US 'Nsọ n'Ala' Okwu Park arụkwaghị." Ozi Ndị Kraịst, September 5. Nweta site na https://www.christianpost.com/news/head-of-u-s-holy-land-theme-park-resigns-29196/ na 4 April 2018.
"Live Church Orlando." 2018. Ndụ Ndụ Orlando weebụsaịtị. Nweta site na https://www.livechurchorlando.com/#who-we-are na 18 April 2018.
Lowrie, Tyson. 2014. "Orlando's Strangest Theme Park is All About Jesus and Jesus Related Merchandise." Vice, March 12. Nweta site na https://www.vice.com/en_ca/article/vdqpwy/the-strangest-theme-park-in-orlando-has-a-daily-passion-of-the-christ-play na 4 April 2018.
Mathews, Jana. 2015. "Isiokwu Park Bible: Atọ n'Ime Otu Broadcasting Network si Holy Land Ahụmahụ na Evangelical Jiri nke Akwụkwọ n'oge gara aga." Akwụkwọ akụkọ okpukpe na omenala ndị mara mma. Afọ: 89-104.
Mayerowitz, Scott. 2010. "Orlando Park Park Wuru Maka Jizọs." ABC News, November 4. Nweta site na http://abcnews.go.com/Travel/holy-land-experience-orlando-theme-park-built-jesus/story?id=12049089 na 16 April 2018.
“Ozi Ahụ.” nd Zion Olileanya weebụsaịtị. Nweta site na http://www.zionshope.org/ZH_ministry.html na 4 April 2018.
Pinsky, Mak. I. 1997. "Ebumnuche Ndị Kraịst: Ndị Na-atụgharị Ndị Juu N'etiti Ndị Juu." Orlando Sentinel, November 8. Nweta site na http://articles.orlandosentinel.com/1997-11-08/news/9711071203_1_zion-hope-jews-faith-baptist na 4 April 2018.
Pinksy, Mak. 2006. Otu onye Juu n'etiti ndị Evangelicals: Nduzi maka Mgbagwoju Anya. Louisville: Westminster John Knox Press.
Pinsky, Mark I. 1999. “Orlando Ọ Bụ Ala Nkwa Ọhụrụ?” Iso Ụzọ Kraịst Taa, February 8. Nweta site na http://www.christianitytoday.com/ct/1999/february8/9t209a.html na 4 April 2018.
Ritz, Erica. 2012. “Ebubo nke Televangelists na-apụnara $ 50 Million site na Trinity Broadcasting Network. The ọkụ, March 24. Nweta site na https://www.theblaze.com/stories/2012/03/24/televangelists-accused-of-defrauding-50-million-from-trinity-broadcasting-network na 4 April 2018.
Rodgers, Bethany. 2016. "Nsọ Land Ahụmahụ Tax Exemption echekwara Park $ 2.2M Ebe ọ bụ na 2006." Orlando Sentinel, February 25. Nweta site na http://www.orlandosentinel.com/features/religion/os-holy-land-experience-tax-breaks-20160225-story.html na 4 April 2018.
Silverman, Jacob. 2016. "Hotdogs na Zayọn." Onye Baffler, Nke 31, June. Nweta site na https://thebaffler.com/salvos/hotdogs-zion-silverman na 4 April 2018.
Na-agbakasị, John. 2002. “Ezigbo oyiri.” Narị Afọ Ndị Kraịst, Julaị 3-10, Pp. 14-15.
Stevens kwuru, 2017. "Jury Finds Televangelist Jan Crouch Shunned Akụkọ nwa nwa nwanyị banyere mmeko nwoke." The New York Times, June 7. Nweta site na https://www.nytimes.com/2017/06/07/us/trinity-broadcasting-verdict.html na 4 April 2018.
Onyekwere, Jill. 2013. Nsọpụrụ Mmasị: Ọrụ Evangelical na Narị Afọ Iri na Abụọ America, Ann Arbor: Mahadum nke Michigan Press.
"Akụkọ ihe mere eme nke Olileanya Zaịọn." nd Ebe nrụọrụ weebụ olile anya olile anya. Nweta site na http://www.zionshope.org/iframe_html/ZH_ministry_v003.html#history na 4 April 2018.
"Ahụmịhe Ala Nsọ." nd Ebe nrụọrụ weebụ Ahụmahụ Nsọ Dị Nsọ. Nweta site na https://holylandexperience.com/ na 4 April 2018.
Tracy, Dan. 2015. "Ala nsọ Mural bụ ihe ijuanya nye steeti-nke nwere mgbidi ya na-ese ya." Orlando Sentinel, November 25. Nweta site na http://www.orlandosentinel.com/business/tourism/os-holy-land-mural-20151125-story.html na 4 April 2018.
Vincent, Lynn. 2016. "roomlọikpe Oké Ifufe." Magazin Ụwa, April 15. Nweta site na https://world.wng.org/2016/04/courtroom_storm on 4 April 2018.
Walsh, Raymond. 2012. "Holy Grail of Hokey: Inside the Holy Land Experience Part II." Nwoke na Lam, June 3. Nweta site na http://manonthelam.com/holy-grail-of-hokey-inside-the-holy-land-experience-part-2/ na 16 April 2018.
Wolf, Colin. 2016. "Ahụmịhe Ala Nsọ, nke anaghị akwụ ụtụ isi ọ bụla, Na-enwe Ọrịre Ahịa Na Izu A." Isi, July 20. Nweta site na https://www.orlandoweekly.com/Blogs/archives/2016/07/20/the-holy-land-experience-which-doesnt-any-pay-taxes-is-having-a-massive-estate-sale-this-weekend on 4 April 2018.
Woo, Elaine. 2013. “Paul Crouch nwụrụ na 79; tọrọ ntọala Atọ n'Ime Otu. ” Los Angeles Times, November 30. Nweta site na http://articles.latimes.com/2013/nov/30/local/la-me-paul-crouch-20131201 na 16 April 2018.
Zadrozny, Akara. 2016. "byedeewo nye Queen nke Jesus TV, Jan Crouch." Beast, June 5. Nweta site na https://www.thedailybeast.com/goodbye-to-the-queen-of-jesus-tv-jan-crouch on 4 April 2018.